Putin: Rosia mila hampandrosoana ny crypto sy blockchain teknolojia - Blockchain News
Rosiana Filoha Vladamir Putin nihaona tamin'ny Herman Gref, ny filohan'ny banky lehibe indrindra Rosia, Bank ny fotoana, dia niresaka momba ny maha zava-dehibe ny cryptocurrencies.
Ary hoy izy ireo firenena izay efa legislated hanohitra cryptocurrencies ao dia mamoaka fifindran'ny goavana any ivelany ny tahirin-kevitra sy ny fitrandrahana foibe, ary toy izany koa ireo firenena mpanohitra ny crypto ho miankina ny mpitarika avy any amin'ny tany izay fampandrosoana izany ny teknolojia.
Te hilaza izy izao no zavatra ratsy, ho miankina amin'ny firenen-kafa, rehefa Rosia mpitarika manana ny fototra ara-tsaina sy ny fitaovana mba ho lohalaharana ny cryptocurrency orinasa sy hampandroso ny teknolojia ny tenany.
Putin ihany koa hoy ny zava-dehibe ny manararaotra ny lafin-javatra rehetra sy ny fahafaha ho teknolojia ho amin'ny daty momba virtoaly vola.
Previous Post:Mpanamboatra fitaovana fitrandrahana Bitmain nahazo $ 3b tamin'ny taon-dasa, araka izay Nvidia
torturing hoy i:
Febroary 27, 2018 amin'ny 2:45 PM
Febroary 27, 2018 amin'ny 3:21 PM